Qorshaha Fahad iyo Farmaajo ee kursiga Muuse Suudi | KEYDMEDIA ONLINE
Qorshaha Fahad iyo Farmaajo ee kursiga Muuse Suudi
JOWHAR, Soomaaliya - Fahad iyo Farmaajo oo bishii November 2020, sifo sharci darro ah, kursiga Madaxweynaha Hirshabeelle, ugu fariisiyay Cali Guudlaawe Xuseen, si uu uga shaqeeyo soo laabashadooda doorashada Dowladda dhexe, ayaa ku hungoobay in ay hirgaliyaan damacoda koobaad oo ahaa in Xaaji Muuse Suudi Yalaxow, laga reebo tartanka kuraasta Aqalka Sare.
Sida ay Keydmedia Online baahisay 26 August 2021, Madaxweynaha Hirshabeelle, Cali Guudlaawe, ayaa ku gacan seyray dalab uga yimid Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, oo ahaa inuu tartanka kuraasta Aqalka sare ee Baarlamaanka JFS, ka reebo Xaaji Muuse Suudi, hayeeshee, ugu danbeyn waxaa la isla ogolaaday in baratanka kursigaas lagu daro siyaasi ka socda Madaxtooyada.
Cabdullaahi Sheekh Xasan, oo ay garab socdaan, wakiillo Villa Soomaaliya u dhiibatay lacagtii lagu boobi lahaa kursiga Muuse matalayay, ayaa dhawaan gaaray Xarunta Goblka Shabeellaha dhexe ee Jowhar, wuxuuna halkaas kaga dhawaaqay musharaxnimadiisa.
Shalay ayuu isna ka degay Jowhar, wuxaana si weyn u soo dhaweeyay bulshada magaalada oo si aan gambad lahayn uga mahad celiyay shaqadii uu degaanka uu matalo iyo guud ahaan dalkaba u qabtay afartii sano ee na-weydaaratay.
Cali Guudlaawe, oo fahansan in kusiga Xaaji Muuse, uu yahay midka ugu misaanka culus beeshiisa, ogna in indhaha lagu wada haayo, ayaa la filayaa inuu saaccadaha soo socda soo saaro liiska musharixiinta Sideedda kursi ee Aqalka sare ee laga sugayo Jowhar.